ဒါကြောင့် ... သူတို့ယောက်ျားလေးများကိုသူတို့ချစ်သူရည်းစားပေးခွင့်ပြုလားမေးသည် - သတင်း
ဒါကြောင့် ... သူတို့ကသူတို့ရည်းစားသူတို့ကိုတံစို့စေချင်ပါတယ်လျှင်ငါတို့သည်ဖြောင့်ယောက်ျားလေးများကိုမေးခဲ့တယ်
Pegging အခုအချိန်မှာခဏရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းလူတွေ lockdown အတွက်ကြောင့်ပျင်းနေကြတယ်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျနော်တို့နောက်ဆုံးမှာမဆိုကြင်နာ၏စအိုကစားဟန်ဆောင်ရပ်တန့်ဖို့ပဲအဆင်သင့်ပါပဲ, ကြီးသောနှင့်အပြစ်ရှိသည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, pegging သို့ဖြစ်ဖို့ပိုကောင်းတဲ့အချိန်ရှိခဲ့သည်ဘယ်တော့မှပါတယ်။ လူမဆန်သောသူများအတွက်တံစို့သည်အခြေခံအားဖြင့်ယောက်ျားသည် dildo ပေါ်တွင်သိုင်းကြိုးဖြင့် Bum ကိုရိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သပ်သပ်ရပ်ရပ်! တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၏အယူခံများသည်တော်တော်လေးသိသာသည်။ တ ဦး တည်းအနေဖြင့်, cisgender ယောက်ျားတစ် ဦး ဆီးကျိတ်၏အပိုင်၌ရှိသည်, ထိုလှုံ့ဆော်ရှိခြင်းသည်ကြီးမြတ် fuck ဆိုတဲ့ခံစားရ။ ပြီးတော့သင်သိတဲ့လူတချို့ကလက်အောက်ခံကြတယ်။ ပြီးတော့မင်းရဲ့နောက်ကျောကိုချိတ်ဆွဲပြီးအခန်းကဏ္ sw တွေကိုလဲလှယ်တာကိုဖော်ပြဖို့ဘယ်လိုပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းလဲ။
လီဗာပူးလ်မှယောက်ျားလေးများသည် Midnight Chats ဟုခေါ်သော The Boys နှင့်အတူ TikTok ဖြင့်ဗိုင်းရပ်စ်ထွက်ခွာသွားသည့် Peg-mania သည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာသူတို့အမှန်တကယ်တံတားရချင်ပါတယ်ချင်ပါတယ်ရှိမရှိဆွေးနွေးလူကလေးများပြသထားတယ်။ အဆိုပါဗီဒီယိုသူတို့အတော်လေးကသို့ဖြစ်ချင်ပါတယ်အကြံပြုထားသည်။ ငါ့ကို fuck ဆိုတဲ့အဝတ်လျှော်, အိမ်ထောင်ဖက်ကဲ့သို့ကျေးဇူးပြုပြီး, တ ဦး တည်းအချက်တစ်ချက်မှာကပြောပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ ငါတို့သူတို့အားပြောသောအခါ၊ သူတို့နိုးနေသောကြောင့်သူတို့လွန်ကဲကဲ backpedaled ။ သို့သော်ဤတိုင်းပြည်ရှိအခြားချစ်စရာကောင်းသောဖြောင့်မတ်သူများကော။ အမည်မသိစစ်တမ်းတစ်ခု၏လွတ်လပ်ခွင့်သည်သူတို့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းချိတ်ဆက်ထားလိုသောသူတို့၏ ၀ န်ချမှုကိုဝန်ခံမည်လား။
ငါ hknahahaha အော်ဟစ် fkn တာပါ pic.twitter.com/haMAZbWUaQ
- ကေတီ (@kaatiemxx) ဇွန်လ 10, 2020
ကောင်းပြီ၊ သင်အဲဒီ့အဖြေကိုစဉ်းစားစရာမလိုတော့ပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာတွေအတိအကျပါပဲ။
shit ကိုငါ့မြည်းမှထွက်လာသောအခါထူးဆန်းခံစားရ, ငါတကယ်မယ့်အရာတစ်ခုခုကိုခံစားဖန်စီကြဘူး! တခြားသူတွေကိုမလုပ်တာမင်းသင်လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါလက်ဖက်ရည်သောက်တာမဟုတ်ဘူး။
- Colin, 20
- Stew, 20
ငါစိတ်အားထက်သန်ဘူး။ ရံဖန်ရံခါစအိုကစားခြင်းနှင့်ပေးဆပ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သောသူတစ် ဦး အနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တွင်ထည့်သွင်းထားသောအရာတစ်ခုခုရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ပြုလုပ်ပေးခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် fuck ဆိုတဲ့ခံယူချက်ဖြစ်သည်။ fuck ဆိုတဲ့ခံရငါ့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားခံစားရစေမယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့် pegging သူ့ဟာသူတစ်ခုလုံးကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ရပ်သော်လည်း, လက်ချောင်းခံရခြင်းကိုချွတ်စို့ခံရခြင်းသို့မဟုတ်ငါထိပ်ပေါ်မှာပေါ့ကဲ့သို့သောအခြား -bits ကိုမှကောင်းတဲ့အပြင်ထို့အပြင်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာငါ့ ဦး ခေါင်း၌ဆွဲဆောင်ကြောင်းမထင်ထားဘူး။ ငါအရာများစွာကိုကြိုးစားကြိုးစားမှပွင့်လင်းတယ်, ဒါပေမယ့်ငါ pegging ပျော်မွေ့မယ်လို့နီးပါးသေချာပါတယ်။
- ဟယ်ရီ, 23
တစ်ဦးဘီယာ chug မှအမြန်ဆုံးလမ်း
- လာဗင်ဒါ (@lilalavender_) ဇွန်လ 11, 2020
- Hugh, 20 နှစ်
- Harold, 23
- ကူးတို့, 21
ကျွန်ုပ်ကြိုးစားချင်သောအရာမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်သင်မည်သူလုပ်ဆောင်နေသည်ကို၎င်းနှင့်ထိုလူနှင့်သင်မည်မျှသက်သောင့်သက်သာမှုအပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။ ငါခန့်မှန်းတခါအရာအားလုံးကိုကြိုးစားကြည့်ပါ ငါစဉ်းစားနိုင်သမျှကငါကနေရရှိချင်ပါတယ်ကျေနပ်မှုထက်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်နာကျင်ဖြစ်ပါတယ်။
- ဆမ်၊ ၂၁ နှစ်
ငါအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုကြောင့်ကြိုးစားချင်တယ်: 1) ငါဝန်ခံပါလိမ့်မယ်တော်တော်လေးလကျအောကျခံမိပါတယ်။ pegged ခံရ၏စိတ်ကူးငါရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့ fetish ၏ကြင်နာဖြစ်ပါတယ်။ ၂။ မင်းရဲ့ဘ ၀ မှာအနည်းငယ်စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဒါဟာပျင်းဖို့ကောင်းတယ်။
အဲဒီမှာ 365 ရက်ဖို့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပါသည်
- ဂျော့ခ်ျ, 21
- အီရှန်၊ ၂၁ နှစ်
ငါ့ကို PS5 secure ဖို့ငါ့အသကြား Momma ရဲ့ 12 လက်မအားဖြင့် pegged ရတဲ့ pic.twitter.com/T8ztFU2OTx
- Chidden Nuddet (@Maraculousness) ဇွန်လ 12, 2020
တစ်စုံတစ် ဦး ကိုထွက်ခေါက်ဖို့ xanax ဘယ်လောက်
- တိ၊ ၂၄ နှစ်
- Moose, 24
ဒါကြောင့်အများကြီးအတွေးပေးထားဘယ်တော့မှငါစိတ်ကူးအပေါ်အလွန်အမင်းစိတ်အားထက်သန်တယ်မပြောနိုင်ပါ။ ငါနှင့်အတူရှိ၏လူတစ် ဦး ကကြိုးစားရန်အပူတပြင်းကြီးနှင့်ကျွန်တော်အသက်အရွယ်အဘို့အအတူတူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် probs သာခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကကြီးစိုး၏မေးခွန်းကိုဒါပေမယ့်လည်းမသိသောစဉ်းစားပါ။ ကျိန်းသေအဖြစ်ကောင်းစွာအကြားအတွက်ခြေလှမ်းများဖြစ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်, ကဖြောင့်မသွားဘူး။
- Gareth, 23
၁၉၅၅ ခုနှစ်ကကန်အရုပ် vs ၂၀၂၀ ကနေအရုပ်။
၁၉၈၅ t ကဲန်သည်စီးကရက်သောက်ခြင်းကိုရှင်းလင်းစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဘာဘရီအားသူ၏ထိပ်ဆုံးကော်ဗက်ကားမောင်းနေစဉ်သူ့ကိုထိုးနှက်စေသည်
2020 ကဲန်တံတားပေါ်သို့ရောက်ရှိသည်။ သိုင်းကြိုး - အပေါ်စွန့်စားမှုကလေးသီးခြားစီရောင်းချခဲ့သည်။ pic.twitter.com/awPmuWh6wk
- TheTalismanLives (@LivesTalisman) ဇွန်လ 13, 2020
- ဟယ်ရီ, 21
အသနားခံစာကိုဘယ်တော့မှနားမလည်ပါ၊ သို့သော်လူများသည်သူတို့ဝင်ရောက်လာသည့်အရာများထဲသို့ ၀ င်ရောက်သည်။ ပါ ၀ င်သူများက၎င်းအတွက်တက်သည်ဆိုပါကမည်သူမျှမထိခိုက်ပါ။
- မက်စ်၊ ၂၂ နှစ်
ယောက်ျားများ pegged ရထိုက်ပေမယ့်ပိုအရေးကြီးတာကကိုယ့်တံစို့ယောက်ျားလေးများထိုက်
- 𝐃𝐘𝐋𝐀𝐍 (@fckbun) ဇွန်လ 14, 2020
- ဆမ်၊ ၂၂ နှစ်
တံစို့ကိုယေဘုယျအားဖြင့်အတော်လေးရယ်စရာကောင်းသည်။ ငါအကြောင်းပြချက်အကြောင်းပြချက်ကသင်၌နေတဲ့သရုပ်ဆောင်မပါလျှင်, အခန်းကဏ္-- ပြောင်းပြန်ရှုထောင့်အတော်လေးထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ပြီး, လူတွေကသူတို့ထူးဆန်းတဲ့ရှာသောအရာတို့ကိုရယ်မောသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာဒီအခန်းကဏ္ roles ဟာဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းဆက်ရှိနေတာကိုနက်နက်နဲနဲအမြစ်စွဲနေတဲ့အတွေးအခေါ်တွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဒီအခန်းကဏ္ us တွေကကျွန်တော်တို့ကို ၀ ိုင်းဝန်းကြိုးကိုင်ထားတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး စားပေးမှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်တခါတော့ခင်ဗျားရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုစွန့်ခွာတာကိုမတားဆီးနိုင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်သူကလူမှုရေးဖိအားပေးမှုတခုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတခုလို့ငါထင်တယ်။ ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါ့ဆန္ဒစာရင်းတွင်မဟုတ်ပါဘူး။ ငါကအတော်လေးနာကျင်တယ်ဆိုတာကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ၊ ငါဟာငါ့အတွက်တက်ကြွတဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေကိုမသေချာဘူး။ ငါကလိင်မှကြွလာသောအခါ ဦး ဆောင်ယူအတော်လေးပျော်ရွှင်မိပါတယ်။
- ကိုးလ်, 23
ငါ့ကို pegged ရတဲ့အကြောင်းနောက်နေနှင့်ငါ့ gf2ရက်အကြာတွင်ယခုငါ့ကိုသို့စေသည်ငါယခုငါဖမ်းမိတယ် pic.twitter.com/hCVEmrF9Jo
- 𝑽𝒊𝒄𝒕𝒐𝒓 (@thetiredeyes) ဇွန်လ 13, 2020
- ပါပလော၊ ၂၄ နှစ်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါ့အဘို့မဟုတ်ပါဘူး။ ငါမတိုင်မီမြည်းပြဇာတ်အချို့နည်းပါးလာမျိုးနှင့်အတူစမ်းသပ်ခဲ့ကြပေမယ့်။ ငါကသို့သောမည်သူမဆိုမဆိုလျော့နည်းစဉ်းစားကြဘူးဒါပေမယ့်ညစာစားပွဲမှာတက်ဆောင်ခဲ့ကြပါဘူး။ P.s. သင့်ကစားစရာများကိုသန့်ရှင်းစွာထားပါ။
- နဗီး, 22
ငါ့ရည်းစား porn ကိုချောင်းမြောင်းငါ့ကိုနှောင့်အယှက်
ငါ့ရဲ့ fuck ဆိုတဲ့မြည်းကနေဝေးနေပါ
- ဒန်နီ၊ ၂၁ နှစ်
• Twitter သည် Beethoven သည်အမှန်တကယ်လူမည်းဖြစ်ပြီး memes များသည်အလွန်ကောင်းသည်ဟုယုံကြည်နေသည်
• Twitter နှင့် Insta တွင်လူတိုင်းအတွက်အရူးအမူးဖြစ်ရသည့်ကျား၊ မလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်ကိုမည်သို့ရယူရမည်နည်း
ပုံရိပ်ဖြင့် Manfred ရစ်ချတာ မှ Pixabay